आजको राशिफलः कसको दिन शुभ कसको अशुभ? हेर्नुहोस् - Dainik Online Dainik Online
आजको राशिफलः कसको दिन शुभ कसको अशुभ? हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ७ : ०७
आज २०७८ साल कात्तिक महिनाको १२ गते शुक्रबार। सन् २०२१ अक्टोबर २९ तारिख। नेपाल संम्बत् ११४१। दक्षिणयान। कार्तिक कृष्ण पक्ष।बिहान सूर्योदय ६ः १३ र सूर्यास्त ५ः२० मिनेटमा हुनेछ । चन्द्रमा कर्कट राशिमा छ । आजको अभिजित मुर्हुतको समय भनेको बिहान ११ः२६ देखि १२ः१० सम्म छ।
हरेक दिन अभिजित मुहूर्त हुन्छ । यसलाई शास्त्रमा शुभमुहूर्त मानिन्छ । अध्यात्मप्रति आस्था राख्नेले गर्ने शुभकर्मका लागि अभिजित मुहूर्तको समयका कर्म गर्ने गर्दछन् । आजका देवता हुन लक्ष्मी, ग्रहदेव हुन सूर्य । सनातनशास्त्र सूर्य भगवान साक्षात नारायण हुन् । आजका तिथि स्वामी हुन ‘शिव’ । चन्द्रमा कर्कट राशिमा भएका हुनाले आजको दिन यात्रा गर्दा उत्तर दिशातर्फको यात्रालाई शुभ मानिन्छ।
यो राशिका व्यक्तिहरूले शारीरिक रूपमा कमजोरी महसुस गर्न सक्छन्। आज आफुलाई फिट राख्नको लागि, तपाई स्वास्थ्यमा सचेत हुनुपर्दछ। दाम्पत्य जीवनका लागि दिन अनुकूल रहनेछ। साझेदारी कार्यमा पनि दिन तपाईको पक्षमा देखिन्छ। व्यापारमा सामान्य आम्दामी हुनेछ। इच्छाएको काम पुरा हुनेछ। नाताको सहयोगले काम बन्नेछ।
वैदेशिक कम्पनीमा काम गर्नेहरुका लागि दिन रमाइलो रहने भए पनि विदेश जाने रहर थियो भने आज पुरा हुनसक्छ। आज शंका तथा डरका कारण बनिसकेको काममा दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । भोजभतेरमा सामेल हुँदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला।
यस दिन चन्द्रमा तपाईको लाभको घरमा बस्ने भएकाले यस दिन तपाईलाई धेरै स्रोतबाट धन प्राप्ति हुनेछ । आफ्नो व्यापार सुरु गर्न चाहने यो राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन धेरै राम्रो हुन सक्छ, आज तपाईले यस मामिलामा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति र प्रगति हुनेछ । मानसिक रूपमा थकान महसुस हुनेछ। घरायसी मामिलामा चिन्ता बढ्नेछ। आज एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । शत्रु र विपक्षी पराजित हुन सक्छन् । विपरित वर्गको भेट र साथ मिल्ने राम्रो योग छ ।
यस दिन यस राशिका व्यक्तिहरूले कार्यक्षेत्रमा रोकिएका काम पनि पूरा गर्न सक्छन्। बेरोजगार भएकाले आज रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।
नयाँ कामको थालानी या योजना बन्ने । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
नोकरीमा दौडधुप बढी हुनेछ। प्रेममा प्रगति मिल्नेछ। कुटुम्बको सहयोगले फाइदा मिल्नेछ। आजको दिन वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले पितासँग राम्रो समय बिताउने मौका पाउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो बुबाबाट केही राम्रो सल्लाह पनि पाउनुहुनेछ र आज तपाईंले जीवनमा धेरै समस्याहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यस राशिका कतिपय व्यक्तिले आजको दिन कामको सिलसिलामा यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।